१ आफ्नै प्रशिक्षण योजना
हामीसँग सबै कर्मचारीहरूका लागि पूर्ण प्रशिक्षण फाईल छ, यसले हाम्रा कर्मचारीहरूको सबै कुरा थाहा पाउनुपर्दछ भनेर देखाउँदछ। उनीहरूको काम सफलतापूर्वक गर्न कुन ज्ञान र सीपहरू हुनुपर्छ?
२. नियमित तालिम सत्रहरू होस्ट गर्नुहोस्
हामी हाम्रा कर्मचारीहरूका लागि नियमित तालिम सत्रहरू आयोजना गर्दछौं। बारम्बार प्रशिक्षणले सीप र ज्ञान कायम राख्न मद्दत गर्दछ। नियमित सत्रहरू अधिक उन्नत सीपहरू सिकाउने र कुनै पनि परिवर्तनहरूको कामदारहरूलाई सूचित गर्नको लागि उत्तम तरिका हो।
Emplo. कर्मचारीलाई प्रशिक्षकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
हामी अत्यधिक कुशल कर्मचारीहरूलाई सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकको रूपमा प्रयोग गर्दछौं।
यी व्यक्तिहरू ती हुन् जसले समय र सटीकका साथ आफ्नो कामहरू पूरा गर्छन्। तिनीहरू व्यवस्थापक हुन सक्छन्। वा, सपाट संगठनहरूमा, तिनीहरू केवल अत्यधिक विश्वस्त कर्मचारीहरू हुन सक्छन्।
हामी उनीहरूलाई उनीहरूको सीप र ज्ञान अन्य कर्मचारीहरूलाई दिन आग्रह गर्दछौं। तिनीहरूले नयाँ कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिन वा निरन्तर प्रशिक्षण कोर्सहरू सिकाउन सक्छन्। हामी तिनीहरूलाई सिकाउन मानक जानकारी दिनेछौं, वा तिनीहरूलाई प्रशिक्षण सामग्री आफैं सिर्जना गर्न दिनेछौं।
Cross. क्रस ट्रेन श्रमिकहरू
हामी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई हाम्रो कम्पनी भित्र अन्य कामहरू गर्न पनि सिकाउँछौं। क्रस प्रशिक्षणले कर्मचारीहरूलाई अझ राम्रो प्राथमिक प्राथमिक कामहरू गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले सीप प्राप्त गर्न सक्छन् जुन तिनीहरूले आफ्नो कार्यहरूमा लागू गर्न सक्दछन्। र तिनीहरू राम्रोसँग जान्दछन् कि अन्य पदहरूमा सह-कार्यकर्ताहरूबाट के अपेक्षा गर्ने हो।
Training. प्रशिक्षण लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्
हाम्रो तालिम कार्यक्रम काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हामी निर्धारण गर्दछौं। यो गर्नका लागि, लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस् र ट्र्याक गर्नुहोस् कि तिनीहरू पूरा भइरहेका छन् वा छैनन्।